TCM therapy Physical - Shijiazhuang YiLing Hospital
1. Meridian device lead therapy
Inqanaba sikhokelo okuyi izixhobo enyangayo isebenzisa kwindibaniselwano yethekhinoloji elektroniki kunye nobugcisa microcomputer kunye zemveli theory amayeza Chinese le lokhokho ukwenzela ukuba lokugqojozwa, yokuthanjiswa kunye yokuthanjiswa unyango amayeza Chinese ukuba yaqaphela umboniso lwedijithali izixhobo zonyango. msebenzi wayo abadumileyo umiselwe yi parameters ulawulo microcomputer, kwaye ngokweemfuno ezahlukeneyo zonyango, zovuselelo, ukhathalelo lwempilo, khetha iintlobo ezahlukeneyo ezisebenzayo unyango, ukuze ukuba ekujoliswe, elula nesebenzayo.
Bone nezifo joint sisiba mandundu, iposi ebuchotsheni, Ukopha ebuchotsheni emva Hemiplegia impilo yomzimba.
2. Meridian flow isixhobo therapy ziphene
Okuyi Stream Qaphela, eyaziwa ngokuba "ixesha lokugqojozwa indlela engcono", yeyona Chinese amayeza kunazo zonke yaye imilingo e China yamandulo, ukususela ephawulekayo ephilisayo nemimangaliso ezikhwankqisayo. Ngaba ukusetyenziswa microcomputer SCM ubugcisa, ekuqondweni Meridian Stream kunye nofudo iindlela ezisibhozo kwexesha kubalwe ngokuchanekileyo, ukusetyenziswa amabala electrode endaweni yenaliti, le Ukulinganisa yokwenene ubuchule lokugqojozwa, moya okusingqongileyo yabantu, ukulinganisela yin yang, ukudlula uncedo esiqu.
Amadolo osteoarthritis, lwegazi, stroke, sokulibala, iqolo, sciatica, intloko ebuhlungu, seTrojan, intamo, spondylosis wesibeleko, igxalaba engumkhenkce, iintlungu isithende kunye like.
3. Microwave izixhobo zonyango
Microwave izixhobo therapeutic asetyenziswe komzimba microwave non-contact kufudumeze ndlela, akukho ithuba amanxeba thermal nokutsha zombane okubangelwa kukudibana zombane. Ngenxa ukuphucula ubugcisa ezahlukeneyo, unyango microwave ngaphandle zomzimba, sinokuzaliswa ekliniki, kunye neempawu ezilula, ekhuselekileyo.
1) nomchamo: umhlaza isinyi, hypertrophy prostatic, prostatitis
2) Department of kwisisu: cheilitis, glossitis, polyp, isifo periodontal, izilonda, periodontitis periapical, umhlaza.
3) Gastroenterology: ukopha zesisu, liqhubu ukutsha, isilonda Ukuqinisa, dilatation elimxinwa esophageal.
4) ukuyifundisa kwimo: empontshwa uhlobo kwezihlunu, spondylosis wesibeleko, komsipha, igxalaba engumkhenkce, samathambo, ukukhawulezisa inxeba ukuphiliswa.
5) ne G: ukhukuliseko wesibeleko, polyp, fibroids zesibeleko, imastitis, හසුරුව isiphathi, zangasese isifo kwiintetho ezikralayo, Pasteur cyst, iintsumpa angasese.
6) Dermatology: iintsumpa angasese, ivumba ikhwapha, hemangiomas, ngamaxolo, nerhashalala.
7) Anorectal: hemorrhoids yangaphakathi, hemorrhoids yangaphandle, hemorrhoids engumxube, polyp efakwa, nangokhwekhwe ezimpundu.
8) ENT: epistaxis, nokuthimliswa esinganyangekiyo, obuphantsi turbinate hypertrophy, polyp ngeempumlo, pharyngeal lymphoid zoboya, nasopharyngitis, tonsils.
4.M ulti-umsebenzi isixhobo moxibustion
isixhobo ngemiba moxibustion isekelwe kumgaqo moxibustion zemveli, kudityaniswe ikhompyutha ubugcisa electronic mihla kunye nonyango Imagnethi ceba nesilungiselelwe ukuba moxibustion efudumeleyo, lokugqojozwa efudumeleyo, moxibustion, alephuze amagwebu moxibustion, ukusebenza moxibustion moxibustion kwezixhobo moxibustion mihla.
1) umkhuhlane, isifuba njalo
2) rheumatism kunye isifo samathambo, spondylitis enyanzelekileyo, spondylosis wesibeleko, umlenze ekhenkciweyo njalo njalo.
3) izifo Ngezifundo.
4) ukurhuda nesisu esibuhlungu kunye nezinye izifo esiswini.
5) Nciphisa umzimba.
6) Yonke izifo ezibandayo
5. instrument Red unyango
Red isixhobo therapy ukukhanya uhlobo olutsha yesixhobo unyango ukukhanya linokusetyenziswa kwizibhedlele kunye neentsapho ukuba ukunika unyango olungcono ezinkulu ezinye izifo ndawo. output Ukukhanya yohlulwe iifayile abakwazileyo ukuzenza nezo bawe ukuziqhelanisa kwizigulane ezahlukeneyo bayo. Lo matshini yonke yamkela ezinokususwa uyilo floor kwikhabhinethi, intloko ukukhanya elibomvu nako ngombane ngamandla ukuya ngcembe, oko kukuthi, ukukhanya manual ebomvu kunye auto ukukhanya ebomvu kwimarike, ekwenza kube lula kakhulu abasebenzi zonyango.
1) ne G: cervicitis, හසුරුව isiphathi, zangasese isifo kwiintetho ezikralayo, Isihlomelo nangokurhala, leukoplakia, ukurhawuzelela angasese, usuleleko osecaleni nonyango.
2) Amadoda: prostatitis, inxeba kunye nonyango restorative.
3) dermatology: ngamaxolo, izilonda, dermatitis, irhashalala, bedsores njalo njalo.
4) ENT: nokuthimliswa etsolo kwaye engapheliyo, pharyngitis njalo njalo.
5) Surgery: ukutsha, ukonzakala, usuleleko kunye ukuphiliswa yotyando.
6. UKUBA isixhobo therapy ukubetha
Iintlungu, ukukhuthaza kwegazi, ukusebenzisa izihlunu skeletal, ukuthambisa amabala.
Njengoko uhlobo ukuyifundisa UKUBA electrotherapy unembali kwiminyaka engaphezu kwe-100. UKUBA electrotherapy ludlala indima ebalulekileyo unyango, uthintelo, ukulungiswa kunye nempilo inkathalo kwaye iye yaba yinxalenye ebalulekileyo yonyango ezibanzi.
1) izihlunu Soft, osteoarthrosis, spondylosis wesibeleko, igxalaba engumkhenkce, isifo samathambo, ithambile izihlunu contusion, myositis, tenosynovitis, yalityalwa yoma njalo njalo.
2) Ezinye izifo zotyando, loloyiko, azikhuli, post-inaliti sclerosis, ukukhubazeka postoperative amathumbu njalo njalo.
3) izifo luvo, peripheral neuropathy, neuritis yobuso, sciatica njalo njalo.
4) izifo Digestive, kwempixano zesisu, ukuqhina kade njalo njalo.
5) Amanye amatye womchamo, ukugcinwa wokuchama, ezinganyangekiyo zangasese isifo arhabaxa.